Gen 13 | Shona | STEP | Zvino Abhuramu wakakwira, akabva Ijipiti, iye nomukadzi wake, nezvose zvaakanga anazvo, naRo­tiwo anaye; vakaenda kurutivi rwenyasi.
Abhuramu naRoti vanoparadzana
1 Zvino Abhuramu wakakwira, akabva Ijipiti, iye nomukadzi wake, nezvose zvaakanga anazvo, naRo­tiwo anaye; vakaenda kurutivi rwenyasi. 2 Abhuramu wakanga akafuma kwazvo mombe, nesirivha, nendarama. 3 Akafa­mba nzendo dzake achibva nyasi kusvi­kira paBheteri, kunzvimbo iya kwaiva netende rake pakutanga, pakati peBheteri neAi; 4 kunzvimbo yearitari, yaakanga ai­tapo pakutanga; Abhuramu akanamata zita raJehovha ipapo.
5 NaRoti, iye wakaenda naAbhu­ramu, wakanga aine makwai, nemombe, namatende. 6 Nyika ikasavaringana, kuti vagare panzvimbo imwe; nokuti fuma yavo yakanga iri zhinji; vakasagona ku­gara panzvimbo imwe. 7 Vafudzi vezvi­pfuwo zvaAbhuramu navafudzi vezvi­pfuwo zvaRoti vakaita nharo; vaKenani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo.
8 Ipapo Abhuramu akati kuna Roti, "Nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe, napakati pavafudzi vangu navafu­dzi vako, nokuti tiri hama. 9 Ko nyika yose haizi pamberi pako here? Para­dzana hako neni; kana iwe ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi; kana iwe ukaenda kurudyi ini ndichae­nda kuruboshwe."
10 Roti akasimudzira meso ake, akaona bani rose reJorodhani, kuti raka­nga riine mvura pose, Jehovha achigere kuparadza Sodhomu neGomora; rakanga rakaita somunda waJehovha, senyika yeIjipiti, kana munhu achienda Zoari. 11 Roti akazvitsaurira bani rose reJorodhani; Roti akaenda kurutivi rwamabvazuva; vakapa­radzana havo. 12 Abhuramu akagara pa­nyika yeKenani, Roti akagara pamaguta aiva kubani, akaswededzera tende rake kusvikira paSodhomu. 13 Zvino varume veSodhomu vakanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo-kwazvo.
14 Zvino Roti wakati aparadzana naye, Jehovha akati kuna Abhuramu, "Simudza hako meso ako ipapo paugere, utarire kurutivi rwokumusoro, norwe­nyasi, norwokumabvazuva, norwokuma­virira; 15 nokuti nyika yose yaunoona, ndichaipa iwe navana vako nokusinga­peri. 16 Ndichaita vana vako seguruva renyika; kuti kana kuine munhu anogona kuverenga guruva renyika, navana vako vangaverengwawo. 17 Simuka, ufambe nenyika pakureba kwayo, napaupamhi hwayo, nokuti ndichakupa iyo." 18 Ipapo Abhuramu wakabvisa tende rake, aka­ndogara pamiti yemiouki yeMamure, iri paHebhuroni, akavakirapo Jehovha aritari.